Mwakpo APT: Ihe iyi egwu na -adịgide adịgide ha nwere ike imetụta Linux? | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 14/08/2021 06:00 | Noticias, Netwọk / Sava
Taa, mbipụta anyị si n'ọhịa nke Nche IT, kpọmkwem na isiokwu nke ihe a maara ugbu a "Mwakpo APT" o Egwu Na -adịgide Adịgide
Ma ọ bụrụ na ha nwere ike imetụta ndụ anyị Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe dabere na GNU / Linux, na otu anyị nwere ike isi mee iji zere ma ọ bụ ibelata ha.
Ndụmọdụ Nchedo Kọmputa maka onye ọ bụla n'oge ọ bụla
Ka anyị buru n'uche na, ụdị niile mwakpo kọmputa na -agbadokarị anya Sistemụ Njikwa nkeonwe, mechiri emechi dị ka Windows na MacOS. Nke a bụ n'ihi nnukwu ewu ewu ha.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị na enwere echiche n'ozuzu ya GNU / Linux bụ a Sistemụ arụmọrụ dị oke mma, nke bụ eziokwu n'ezie, nke ahụ apụtaghị na ọ nweghị ike ibute ya mwakpo koodu ọjọọ.
Yabụ, ọ dị mkpa ịgbaso ihe ọ bụla nkwanye ma ọ bụ ndụmọdụ iji nyere anyị aka n'ọrụ ịchekwa anyị cybersecurity. Ndụmọdụ dị ka ụfọdụ nke anyị kwuworo na mbụ, anyị ga -ekerịtakwa ọzọ, ozugbo na -ahapụ njikọ nke mbipute metụtara gara aga yana ndị ọzọ yiri ya n'okpuru:
"Ma n'ụlọ, n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'ebe ọrụ, n'aha nrụpụta ma ọ bụ nkasi obi, anyị na -arụkarị ọrụ ma ọ bụ na -eme omume ndị na -emegidekarị omume ọma na nchekwa Kọmputa, nke ga -emecha nwee ike bute nnukwu nsogbu ma ọ bụ na -efu onwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ. Ya mere, ijikọta ihe dị mkpa na ihe nchekwa nchekwa Kọmputa dị mkpa na ọrụ anyị, nkeonwe na ọrụ, bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji melite nrụpụta nke onwe anyị ma ọ bụ dị ka ndị ọrụ, ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ otu anyị na -arụ ọrụ." Ndụmọdụ Nchebe Kọmputa maka Onye Ọ Bụla Oge Ọ Bụla, Ebe Ọ Bụla
Sigstore: Projectlọ ọrụ iji melite oghere na-emeghe oghere
1 Mwakpo APT: Egwu Na -adịgide Adịgide
1.1 Kedu ihe bụ mwakpo APT?
1.1.1 Di elu
1.1.2 Na -adịgide
1.2 Kedu ka anyị ga-esi zere mwakpo kọmputa ụdị APT na GNU / Linux?
1.2.1 Omume Nkịtị
1.2.2 Omume di elu
Mwakpo APT: Egwu Na -adịgide Adịgide
N'ọkwa akụkọ, ọkachasị n'afọ ndị na -adịbeghị anya, anyị enweela ike ịghọta mmụba na mwakpo cyber, ma mba ma ụlọ ọrụ ọha na nkeonwe. Karịsịa ugbu a, na -abawanye na ọrụ dịpụrụ adịpụ (telecommuting) n'ihi ọnọdụ nke Ọgbaghara covid-19. Akụkọ nke mwakpo yinye ọkọnọ, mwakpo ransomware ma ọ bụ mwakpo nledo cyber, n'etiti ndị ọzọ, na -anụkarị ugboro ugboro taa.
Agbanyeghị, enwere ụdị mwakpo na -ewuwanye nke ukwuu nke nwere ike imetụta ndị ọrịa nke ọma. GNU / Linux dabeere Operating Systems. A na -akpọkwa ụdị ọgụ cyber a "Mwakpo APT" o Egwu Na -adịgide Adịgide.
Kedu ihe bụ mwakpo APT?
Un "Mwakpo APT" enwere ike ịkọwa ya dị ka:
"Mwakpo a haziri ahazi lekwasịrị anya n'inweta ohere kọmputa ogologo oge site n'aka onye na -enweghị ikike ma ọ bụ otu. Ihe kpatara ya, ebumnuche ya bụkarị izu ohi data n'ụzọ dị oke ma ọ bụ nlekọta (nleba anya) nke ọrụ nke netwọkụ kọmpụta wakporo. Mwakpo APT na -adịkarị mgbagwoju anya, ebe dịka ọmụmaatụ, ha na -ejikọkarị usoro dị iche iche dịka SQL na XSS. Yabụ, ịzere ma ọ bụ ichebe onwe gị pụọ na ha chọrọ atụmatụ nchekwa kọmputa siri ike ma sie ike."
Na nkọwa, acronyms APT (Egwu Na -adịgide Adịgide) rụtụ aka na:
Iji akwụkwọ akụkọ ọhụrụ na mgbagwoju anya nke usoro hacking dị iche iche na ama ama iji nweta ebumnuche ebum n'obi. Ọtụtụ n'ime usoro ndị a n'onwe ha adịchaghị ize ndụ ma ọ bụ dị irè, mana ejikọtara nke ọma ma jiri ya mee ihe nwere ike ikwe ka onye ọ bụla ma ọ bụ otu nweta ohere, ma mebie sistemụ ahụ wakporo.
Ogologo oge mwakpo dị otu a nwere ike were n'ime sistemụ mwakpo tupu achọpụtara ha. Nke a karịa ihe niile dị mkpa, ebe ọ na -enye ohere imezu ebumnuche ya, ya bụ, izu ohi (mmịpụta) nke data dị ka o kwere mee. Izu ohi na enweghị ike ịchọta oge kachasị ogologo na mwakpo bụ ihe e ji amata ndị na -eji ụzọ ndị a.
Nnukwu ihe iyi egwu nke mwakpo nke ndị a, nke na -ejikọ mmemme obi ọjọọ nke jisiri ike wakpo sistemụ kọmputa ogologo oge iji zuo data ma mụta ozi dị nro gbasara ihe omume. Na ndị niile na -awakpo nwere oke mkpali nyere ikike nka na akụrụngwa pụrụ iche maka ndị otu, nke na -enyekarị ọrụ dị oke mkpa ma ọ bụ na -ejikwa ozi dị nro sitere n'aka ndị ọrụ na ndị ahịa.
Kedu ka anyị ga-esi zere mwakpo kọmputa ụdị APT na GNU / Linux?
Nke ukwuu maka Kọmputa dika Ndị savana GNU / Linux ma ọ bụ Sistemụ Nrụọrụ ndị ọzọ, ọ kacha mma ka emejuputa atumatu ole enwere ike, n'etiti nke anyị nwere ike ịkọwa ihe ndị a:
Jiri nlezianya hazie firewall (s) ejiri, hụ na ha debere ndekọ ihe omume wee gbochie ọdụ ụgbọ mmiri niile na -ejighị.
Mepụta ndepụta nke isi mmalite ngwanrọ tụkwasịrị obi (ebe nchekwa), gbochie nrụnye ngwanrọ na edemede sitere na isi mmalite ndị ọzọ.
Na -enyocha akụrụngwa na sistemụ kọmputa ugboro ugboro iji lelee ndekọ ihe omume maka ndị na -egosi mwakpo. Ọzọkwa, na -eme ule ịbanye mgbe niile.
Jiri ụzọ nyocha ihe abụọ na akara nchekwa mgbe ọ bụla enwere ike. Kwadokwa iji okwuntughe siri ike nke a na -agbanwe ugboro ugboro.
Melite Sistemu eji arụ ọrụ na ngwa etinyere n'oge. Ọkacha mma ịhazi mmelite akpaka, na -ezere mmelite ọ bụla site na ọwa ndị enweghị ike ịkọwapụta na ezoro ezo.
Omume di elu
Mee ebe enwere ike ma chọọ ya, Ngwa nwere sistemụ ezoro ezo, Boot tụkwasịrị obi na ngwaọrụ njikwa ngwanrọ ngwanrọ. Karịsịa iji zere mwakpo si n'ime. Ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wụnye ngwaọrụ na -ebelata ohere nke iji adịghị ike sitere na Spear Phishing na mkpọka ngwa.
Jiri ngwaọrụ dị ka Honeypot na Honeynets, nke na -arụ ọrụ dị ka aghụghọ (ihe mgbaru ọsọ dị mfe) ka achọpụta ngwa ngwa mbanye ọ bụla ngwa ngwa, enwere ike ịgbalite mmezi dị mkpa n'oge, site na ịmụ usoro nke ndị omempụ mebiri nchekwa netwọkụ ji.
Jiri Sistemu Nchọpụta Intrusion (IDS) na netwọkụ, ịchọta ma gbochie ndị mwakpo ahụ ime mkparị ARP, sava DHCP Rogue ma ọ bụ mwakpo ndị ọzọ; na Sistemu Nchọpụta Intrusion Nchọpụta (HIDS) dabere na akụrụngwa, iji nyochaa ọnọdụ sistemụ kọmputa ọ bụla ma dọọ aka na ntị n'oge ihe egwu nwere ike ime.
Mejuputa usoro nchekwa kọmputa siri ike (siri ike), ọkachasị n'ihe gbasara Antivirus ma ọ bụ Sistemụ Antimalware, ebe ọ bụ na sistemụ anaghị arụkarị ọrụ megide ha. Ọzọkwa, n'ihe gbasara firewall (firewall). Ebe ọ bụ na onye tozuru oke (nke siri ike) nwere ike ikewapụ kọmpụta anyị nke ọma na ịhazi ya nke ọma nwere ike inye anyị ohere ịchọpụta mwakpo APT, site na nleba anya na inyocha usoro ntinye na ntinye data.
Na nkenke, wusie ike ma kwalite akụrụngwa na akụrụngwa, omume ejiri, usoro iwu, iwu na usoro etinyere ka ọ rụọ ọrụ, ma mee ka onye ọ bụla mara onye ọ bụla mara ha iji bulie nchekwa kọmputa niile.
Maka ozi ndị ọzọ na "Mwakpo APT", Anyị na -akwado ịgagharị njikọ ndị a: 1 njikọ y 2 njikọ.
Na nkenke, o doro anya na ihe anyị maara dị ka "Mwakpo APT" Taa, ha na -esiwanye ugboro ugboro ọgụ, rụrụ site Ndị omekome nke na -etinye mbọ na imepụta ihe ka ukwuu n'oge a na -eme ha. Iji na ijikọta ihe niile enwere ike ime iji nweta ebumnuche ha adịghị mma. Ya mere, emela ngwa ngwa mmezu nke ihe nchekwa ọ bụla banyere GNU / Linux na ndị ọzọ Sistemụ arụmọrụ iji zere ma ọ bụ mebie ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Mwakpo APT: Ihe iyi egwu na -adịgide adịgide ha nwere ike imetụta Linux?
Ezigbo akụkọ. Edere nke ọma ma baa uru n'oge a ebe ICT dị oke mkpa. Otu tụkwasịrị obi n'ihi na dịka ị chere na na "Linux" enweghị nje dị ka na Windows ... ọ tụgharịrị na ị ga -ejegharị dị ka akwa akwa.
Ekele, Paul Cormier. Daalụ maka okwu gị, ọ bụ ihe ọ pleasureụ pụrụ iche na ọ masịrị gị. Anyị na -atụ anya ịkekọrịta ndị obodo IT ọdịnaya dị mma, ọkachasị ndị nwere mmasị na sọftụwia efu, Isi mmalite na GNU / Linux.
Ụbọchị Debian 2021: Debian 11 Bullseye ewepụtara na ụbọchị Debian?
TradingView Desktop: Otu esi etinye ngwa DeFi a na GNU / Linux?